अाजदेखि खुल्याे नमस्ते झरना ! - Saptakoshionline
अाजदेखि खुल्याे नमस्ते झरना !
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २१, २०७५ समय: २:४३:५७
धनकुटा । धनकुटाको पर्यटकीयस्थल साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं. ६ सिम्सुवामा रहेको नमस्ते झरनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको झरना व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
गत असार १ गते इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं.९ का विक्रम तामाङ परिवारसँग झरना घुम्न आउँदा अचानक ढुङ्गा झरेर घाइते भएपछि उपचारको क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि झरना व्यवस्थापन समितिले नमस्ते झरनामा अनिश्चितकालको लागि आवागमन बन्द गरेको थियो । झरना आवागमन बन्द गरेर १ महिनाभन्दा वढी लगाएर झरना घुम्न आउने पर्यटकको सुरक्षाको लागि झरनाको दायाँ–बायाँ माछीकाँडे जाली लगाइएको छ ।
व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष अग्नि लिम्बूका अनुसार साँगुरीगढी गाउँपालिकाको ६ लाख आर्थिक सहयोग र स्थानीय समुदायको ५० हजार गरी ६ लाख ५० हजारमा झरनामा ढुङ्गा नझर्ने गरी माछीकाँडे जाली लगाउने काम सकिएको छ । झरनाको घुम्ने मुख्य स्थानमा माथिबाट ढुङ्गा नझरोस् भनेर माछीकाँडे जाली लगाउने काम सकिएको संस्थापक अध्यक्ष लिम्बूले बताए । झरनाको दायाँ–बायाँबाट आरसिसी पिलर उठाएर दुवैतिर २ मिटर माथिबाट माछीकाँडे जाली लगाइसकिएको लिम्बूले बताए ।
झरना व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिपकुमार लिम्बूका अनुसार मङ्गलबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा झरनामा आवत– जावत खुल्ला गर्ने जानकारी दिएका छन् । लिम्बूले झरनामा घुम्न आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको लागि अबका दिनमा थप सुरक्षा व्यवस्था अपनाइने बताए । साथै उनले झरना आउने पर्यटकको मुख्य गन्तव्य झरनामा रमाउने भएकाले झरनाको विषयमा प्रवेशद्वारबाट अघि बढ्नुभन्दा पहिले नै जानकारी गराइने बताए । झरनामा आउने पर्यटकको सुरक्षाको लागि झरना व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट सुरक्षाकर्मीकोसमेत व्यवस्था गरिने बताए । उनले पर्यटकको चाहनाअनुसार झरना घुमेर प्रवेशद्वारबाट बाहिर फर्किन्जेलसम्म झरना व्यवस्थापन समितिले तोकेको सुरक्षा व्यवस्थाभित्र रहनुपर्ने नयाँ नियम पनि लागू गरिने बताए ।